Sọpụrụ 8 na igwefoto azụ abụọ na Kirin 950 mara ọkwa Gam akporosis
Honor 8 bụ onye ọrụ ugbu a na igwefoto abụọ na Kirin 950 mgbawa
Nsọpụrụ metụtara ya dị ka a Akara Huawei maka ọkwa dị ala nke onye nwere ike iji mee ka ịghara ịchụpụ nnukwu ego ma nwee ike ịnweta ngwaike dị ukwuu, imepụta na atụmatụ, ọ bụ ezie na ekwentị ekwuputara na nso nso a anyị nwere ike ịgbanwe ụzọ iche echiche a. O meela na Xiaomi na oge ọ bụla ọ na-etinye ekwentị dị oke mma, mana na ọnụahịa dị elu karịa maka onye ọrụ ahụ chọrọ ịnweta nke kacha mma.
The Honor 8 bụ ekwentị na-etinye usoro nke atụmatụ dị oke mma mana nke anaghị eru ihe bụ isi nke Huawei, P9. Otu n'ime akụrụngwa kasịnụ nke ekwentị a bụ igwefoto abuo nke dị n'azụ na mgbapụta Kirin 950 nke ga-ahụ maka inye ike niile na nhazi iji nwee ike ịmalite ụdị sọftụwia niile, ma ọ bụ egwuregwu, ọfịs ọfịs ma ọ bụ ngwa ọ bụla ọzọ.
1 Ekwentị pụrụ iche
1.1 Nkọwapụta Sọpụrụ 8
Ekwentị pụrụ iche
The Honor 8 na-abịa na nke ahụ Igwefoto abuo 12 megapixel n'azụ, na otu ihe mmetụta monochrome, na otu iko iko pụrụ iche karịa ihe niile ịchọrọ ọla dị ka ihe eji emepụta.
Na nkọwapụta ngwaike anyị nwere ike ịchọpụta na mgbapu Kirin 950, nke dị nwayọ nwayọ karịa Kirin 955 nke Huawei P9, yana Oge ọsọ ọsọ 2.3 GHz Megide 2.5 GHz, ee, o nwere igwe elekere asatọ ma ọ bụ octa-core. Otu n'ime nkọwa nke ekwentị a bụ na enwere mgbakwunye I5 processor nke ga-eme ka ịdị arọ nke isi mgbawa dị mfe maka ọrụ ndị metụtara ihe mmetụta.
N'ihe banyere RAM na nchekwa, ndị mechara kpebie ịzụta Honor 8 ga-enwe ikike ịhọrọ 3 ma ọ bụ 4 GB nke Ram na 32 ma ọ bụ 64 GB na nchekwa. Ihe anyị ejirilarịrị ọtụtụ igwe ekwentị na-enye ọdịiche dị iche iche maka mkpa ndị ọrụ. Ihuenyo nke ọnụ ya bụ 5,2 sentimita asatọ ma nwee mkpebi nke 1080p, nke ga-abata n'aka maka ịchekwa ndụ batrị. O nwekwara Android 6.0, mana ya na omenaala Huawei nke EMUI. Agbanyeghị, maka Septemba, Onye na-emepụta ihe na China na-ezube ịnye a oyi akwa omenala a site na otu nke na-adị ka gam akporo dị ọcha ma si otú a na-ehichapụ nkatọ a natara na myirịta ya na Apple's iOS.
Nkọwa ndị ọzọ na-eme ka ekwentị a pụta ìhè bụ mmasị ya maka iko kama ịnwe ígwè n'otu oge mgbe atụmatụ nke ọnụ ọgụgụ ndị ahụ dị oke mkpa iji nwee ike ịkpọpụta n'ụzọ ka mma n'ihu ndị ọzọ. Ewezuga nke ahụ Igwe 2.5D dị n'ihu Dị ka ọtụtụ n'ime smartphones ndị ahụ, Honor ahọrọla ka iko dị ka ihe eji eme ihe.
Igwefoto dị na Honor 8 ha bụ otu ihe ahụ na P9. Otu ihe mmetụta bụ sRGB ọkọlọtọ ebe nke ọzọ bụ monochrome, nke a ga-eji nye ọdịiche dị omimi na omimi. Igwefoto dị n'ihu bụ megapixels 8. Ya mere, anyị na-eche ihu ọzọ nke ekwentị ndị ahụ ka anyị leba anya na foto, n'ihi myirịta doro anya na flagship Huawei.
Nkọwapụta Sọpụrụ 8
5,2 inch (1920 x 1080) Full HD 2.5D curved iko ihuenyo, 96% NTSC
Octa-isi Kirin 950 mgbawa (2.3 GHz 4 x A72 + 1.8 GHz 4 x A53) 16nm
3GB / 32GB nke Ram na nchekwa / 4GB / 32 / 64GB expandable ruo 128GB with microSD
A gam akporo 6.0 Marshmallow ya na EMUI 4.1
SIM abụọ nke ngwakọ
Igwefoto azụ 12MP nwere ụda ọkụ abụọ nwere ụda, Laser AF, f / 2.2 aperture, oghere 6p, pikselụ 1.4um
8MP ihu igwefoto nwere oghere f / 2.4
Mkpisiaka mmetụta, infrared mmetụta
Akụkụ: 145,5 x 71 x 7,45 mm
4G LTE, Wi-Fi a / b / g / n / ac (2.4 GHz na 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS, NFC na ụdị USB-c
3.000 mAh batrị
Ọ ga-adị na China na July 19 na agba ise dị iche iche. Ọnụahịa ahụ ọ ga-abụ dollar 299 maka ụdị ya na 3GB RAM na 32GB nke ebe nchekwa dị n'ime. The 4GB Ram na 32GB esịtidem nchekwa version maka $ 344 na 64GB variant maka $ 373.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Honor 8 bụ onye ọrụ ugbu a na igwefoto abụọ na Kirin 950 mgbawa
[Bipute emelitere 22-7-2016] Pokemon Go aghụghọ nke na-enye gị ohere ịchụ nta pokemons na-ahapụghị ụlọ gị. Akụkọ ifo ka ọ bụ Eziokwu?